HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO ISNIN AH 23-NOV-2020
Monday November 23, 2020 - 11:06:36 in Wararka by Mogadishu Times
R/Wasaaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Ro oble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Shalay gaaayM/Baydhabo ee xarunta KMG ah ee ma amulka K/galbeedsoomaaliya .
Safarka R/Wasaare Ro oble ayaa ku qotoma wa da-shaqaynta hay’adaha he er Federaal iyo heer Do wlad Goboleed, dardargeli nta arrimaha doorashooyin ka dalka iyo hirgelinta mashaariicda horumarin eed ay dowladdu u qorsheysay deegaannada K/ Galbeed .
R/Wasaaraha ayaa uga mahad celiyey shacab ka iyo D/G/K/galbeed sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa, waxa u una tilmaamay in socdaalkiisa qeyb ka yahay da rdargelinta mashaariicda horumarineed &barna amijka Xukumadda ee 100 Maalmood.
"Baydhabo waa magaaladii ugu horraysay ee aan booqdo tan iyo intii aan xafiiska imid, saf arkaan waa mid shaqo oo qayb ka ah barnaam ijka Xukuumadda ee 100ka maalmood, waxaa na furi doonnaa mashaariic la hirgaliyay, kuwa cusubna waan dhagax dhigi doonnaa, shacabka K/galbeedna waan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta aad ii fidiseen”.
Inta uu joogo Baydhabo ayuu kulamo kala du wan la qaadan doonaa mas'uuliyiinta, odayaa sha deeganka iyo bulshada rayidka K/galbeed si uu uga dhagaysto warbixinno ku saabsan nol osha deegaannada, caqabadaha jira iyo talooy inkooda ku aaddan horumarinta dalka.
Madaxweynaha K/galbeed Md. Cabdicasiis Xa san Maxamed (Laftagareen) ayaa uga mahad celiyey RW/asaaraha&wafdiga uu hoggaamina yo booqashada ay ku yimaadeen deegaanka, waxuuna tilmaamay inay yeelan doonaan wada tashiyo waxtar u leh dalka iyo dadka Somaliyed.
Doodda ka taagan guddiyada doorashada Soomaaliya ee la xiriirta in xubnaha ku jira qaa rkood ay yihiin askar, ayaa waxaa saacidaya dhanka sharciga.Aqoonyahanada qaarkood ay aa sheegaya inay tahay in dhammaan xubnaha ciidanka ee ku jira guddiyadan ay is-casilaan, maadaama dastuurka Soomaaliya uu dhigayo in ciidamada qalabka sida aysan qeyb ka noqon kar in siyaasadda, sidoo kala ne shaqaalaha dowladda aysan siyaasada qeyb ka noqon karin ilaa ay shaqada ka tagaan.
Aqoonyahan Maxamed Maxamuu Cadde oo ah weriye hore oo ka tirsan BBC, hadana darsa arimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ugu ba aqay ciidamada in aysan ka mid noqon siya asadda, haddii ay hada ku jiraana ay iska casilaan xubinimada guddiga.
"Waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan dastu urka, ciidan iyo shaqaale kama mid noqon kara an siyaasadda, dhalinyarada ciidamadu waa in aan la qaldin, fadlan ka baxa guddiyada sharci ma ahan, mustaqbilkiina yuusan ku ciyaarin rag daneestayaal ah,” ayuu yiri Maxamed Maxamu ud Cadde.
Sidoo kale Maxamed Maxamuud Cadde ay aa dhinaca kale madaxda dowladda iyo kuwa mucaaradka ka dalbaday in aysan dalka gelin qalaalaaso amni iyo mid siyaasadeed.
D.S/waxay diiday doodad ah in xubno ka tirs an sirdoonka ay qeyb ka yihiin guddiyada doora shada, waxayna meesha ka saartay in isbeddel lagu sameeyo.
Mucaaradka ooh adda shir uu uga socda Mu qdisho ayaa wacad ku maray inaysan ka qeyb gali doonin doorashada, haddii aan guddiyada as isbeddel lagu sameyn.
RA’IISUL WASAARE KU XIGEENKA OO TABABAR U FURAY GUDDIYADA DOORASHOOYINKA HEER FEDERAAL.
R/Wasaare Ku Xigeenka XFS Md.Mahdi Ma xamed Guuleed (Khadar) oo tababar u furay Gu ddiyada Doorashooyinka ayaa kula dardaarmay shaqooyinka horyaalla in ay si daacada u guta an.Tababarkan oo soconaya muddo 4maalm ood ah ayaa lagu baranayaa nidaa mka maamul ka doorashooyinka iyo xalinta khila afaadka, taasoo ay bixinayaan khu baro aqoon u leh arrimaha doora shooyinka.
R/W/Ku Xigeenka Mahdi Guuleed ayaa sheegay in sababta bulshada qeybaheeda kala duwan looga soo xushay xubnahan ay ta hay aqoon iyo waayo aragnimo lagu tuhmayo, is la markaana ay si daah furan uga shaqeeyaan in doorashooyinku ku dhacaan.
R/Wasaare ku Xigeenka ayaa tilmaamay in gu ddiyadan ay ku yimaadeen heshiis ay gaareen Maamullada iyo D/Dhexe, isla markaana 2da go le ansixiyeen Madaxwaynaha Jamhuuriyadduna ku soo saaray faafinta rasmiga ah.
Guddiga G/Shacabka ee xaqiiqa Raadinta Na tiijadda Imtixaankii Dugsiyadda Sare ee Dalka ee 2020 ayaa la kulmay xubno ka socda W/ Wa xbarashada, hiddaha iyo Tacliinta Sare oo uu hoggaaminayo Wasiiru Dowlaha C/maan Max amuud Cabdulle (Jaabiri).
Kulanka ayaa W/Waxbarashada looga dhag eystay warbixin kooban oo ku saaban Imtixaan kii shahaadiga ee Dugsiga Sare ee dalka 2019-2020 oo ay qaaday DFS.
Kulanka waxaa Shir-guddoominayey Gudd oomiyaha Guddiga Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, waxaana intiisa badan looga hadlay kulankaas Arrimaha Imtixaannkii shahaadiga, waxaana ka qeyb galay inta badan Guddiga G/ Shacabka ee xaqiiqa Raadinta Natiijadda.
Muran farabadan ayaa ka dhashay markii ay soo baxday Natiijadda Imtixaannkii shahaadiga ee Dugsiga Sare ee dalka, kadib markii ay ku dhaceen boqolaal Arday ah oo u badan kuwa G/Banaadir, waxaana arrintaas waalidiinta So omaaliyo iyo Mas’uuliyiin kale ya ka muujiyeen walaac.
XASAN SHEEKH: SHALAY DALKA WUXUU MARAA IN TOORATOOROW LOO XUKUN DOONTO
Madaxweynihii hore ee Somaliya Xasan Sh. Maxamuud ayaa si wayn u dhaliilay hanaanka Cadaaladeed ee Hay’addaha Garsoorka dalka xilligaan uu maraayo, kadib markii uu ka qayb galay Dood ka baxeysay mid ka mid Tvyada dal ka. Md.Xasan Sh.ayaa sheegay Garsoorka dal ka xilligaan inuu maraayo dadka inay aadaan dhulka Shabaab ay ka taliyaan oo Cadaaladda ay u raadsadaan, taasina ay tahay ayaandaro wayn.Wuxuu sheegay 2016-kii Garsoorka dalka inuu xoogaa hagaagsanaa oo dad ka aysan aadi jirin Tooratoorow, bal se hadda dadka ay aadaan deega nada Shabaab ay ka taliyaan.
Md.Xasan oo arrinkan ka hadla yey ayaa yiri " Laakin Tooratoorow looma cada alad tagi jirin, dadku maxkamadaha ayey tagi jir een, tabarta ha iska jirto, waa la iiga gar daran yahay, inta la iiga dhacay mar weliba waa jirtay, laakin inta saraakiisha dowladda iyo siyaasiyiin ta iyo ganacsatada inta caasiyo la iska daba qa ato, Tooratoorow waxay aheyd meel dhib badan oo Shabaab laga raacdeeyo, laakin Shabaab meel ay dageen, inta nastaan, maxkamado ka dhigtaan inta dadka ugu yeertaan, ku xukmaan, maya ma ahaan jirin, Shalay dalku waxaa uu ta agan yahay in Tooratoorow loo xukun tago, cadaaladdii 2016-kii jirtay iyo midda Shalayna midda rasmiga ah ee lagu cabiri kari taas wa aye.
Dad badan oo ku qanci waayay hanaanka Ga rsoorka Dowladda ayaa aaday deeeganada Sha baab ay ka taliyaan oo Cadaalad u doontay, ta asi oo muujinaysa hanaanka liita ee Garsoorka Dowladda Somaliya.
DHINACYO CULUS OO KU BIIRAY SHIRKA MUQDI SHO IYO WARARKII UGU DAMBEEYEY
Waxaa maalintii 2aad galay shirka ka socda M/Muqdisho oo ay yeelanayaan musharaxiinta xilkaMadaxweynaha Soomaaliya.Shirka Shalay ka socda Muqdisho ayaa ka xoogeystay sidii hore, waxaana ku biiray ururada Bulshada Rayi dka Soomaaliyeed oo qeyb weyn ka ah doora shada Soomaaliya, ahna xubno ay si weyn u dhageysato beesha caalamka.
Madaxda shirka ka qeyb galeysa ayaa marti qaaday bulshada rayidka, waxeyna qeyb ka sa ari doonaan war-murtiyeed ku saabsan xaal adda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doora shada oo dood weyn ka taagan tahay.
Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ayaa dho wr mar oo horey ka digay wax kasta oo horse edi kara in doorashada dalka ay noqoto mid aan dhex-dhexaad iyo caddaalad ahayn.
Sidoo kale shirkaan ayaa la filayaa in ay maalinta berri ah ku biiraan odayaasha dhaqan ka beelaha Soomaaliyeed waxeyna arrintaas sii kordhin doontaa culeyska saaran madaxda dow ladda Soomaaliya ee ah inay wax ka beddelaan guddiyada doorashada eel aga horyimid.
7aadkii horey ayaa qaar ka mid ah odaya asha dhaqanka, gaar ahaan kuwa Hawiye, wax ay la kulmeen R/wasaare Rooble, ayaga oo ka digay tallaabooyin ay qaaday dowladda oo hors eedi kara colaad iyo kala tag.
Villa Somalia ayaa wajaheyso culeyso bad an, hase yeeshee, sida aan xogta ku helnay, wa xaa ka go’an inaysan marnaba aqbalin in guddi yada doorasho wax laga beddelo, taasi oo had dii ay dhacdo ay u aragto fishil siyaasadeed iyo in masraxa siyaasadda looga adkaaday.
Sababta ugu weyn ee diidmada ayaa ah in Villa Somaliaay rumeysan tahay in mucaaradka markii horeba aysan kaalin ku lahayn magacaab ista guddiyada, oo ay ahayd arrin u taalla dowla dda dhexe iyo dowlad goboleed yada, mana ji rto illaa hadda dowlad goboleed si rasmi ah u di iday, inkasta oo Jubaland iyo Puntland ay muu jiyeen diidmo aan shaacsaneyn.
Shirka Muqdisho uga socda Masharixiinta Ma daxweynaha ayaa waxaa uu marayaa meel xas aasi ah, iyadoo shirka ay ku biireen Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka, waxaana sidoo kale qayb ka ah shirka oo aragtidooda ku biiriyay Cul imada Soomaaliyeed.
Culimada oo qayb ka ah shirka sida wararku sheegayaan ayaa waxaa ay soo saareen Culi madu baaq ku aaddan doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo, waxaana ay ku baaqin in wax waliba lagu xaliyo wada hadal iyo isu-tanaasul.
Qoraalka ay soo saaren Culimada oo ka koo ban lix Qodob ayaa waxaa talo soo jedin iyo ba aq loogu diray madaxda doonaysa in u tar-tama an Xilka madaxweynaha Soomaaliya, kuwaasi oo intooda badani ay Muqdisho ku shirayaan, waxana ay sheegeen Culimadu in wixii khilaaf ah oo ku saabsan arrimaha doorashada laga wa da fariisto.
Aragtida Culumada Soomaaiyeed ee ku saa bsan Khilaafka arrimaha Doorashooyinka
sida lala socdo waxaa dalka ka jira ismaan dhaaf siyaasadeed oo ku aaddan arrimaha doo rashooyinka 20202/2021, kaasoo walaac ku abu uray qeybaha kala duwan ee Bulshada ka koo ban tahay.
sidaas daraadeed Culimadu iyagoo qeyb ka ahBulshada Soomaaliyeed ,Gudanayaana Wa ajibkooda Culuamannimo, waxaay usoo jeed in ayaan Dhinacyada kala duwan ee isku haya Si yaasadda Dalka ,Gaar ahaan midda Doorasho oyinka, talooyinka soo socda:-
1-inay ilaah uga cabsadaan dalka dadka ay hoggaanka u yihiin, uguna turaan wax kasta oo culeys ku ah jiritaankooda, walaalnimadooda iyo wadajirkooda.
2-waxaan u soo jeednieynaa dhammaan hey 'adaha ay khuseyso inay qabtaan doorasho xor & xalaal ah oo ay sila oggol yihiin dhammaan dhinacyada ay khuseyso, kuna saleysan heshi isyadii horey loo wada gaaray, oo loo fuliyo si ni yad sami ku dheehan tahay, nabigeenna csw wuxuu yiri
3-waxaan u soo jeedineynaa-waxaa u soo jeed nineyaa dhinacyada kala duwan in wixii khilaaf ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la gu xalliyo wada hadal, walaaltinnimo iyo isu ta nasul wuxuuna yrir:
4- inay joojiyaan dhinacyada kala duwan haddalada xanafta leh , iyo waxkasta oo hurin kara xaaladda dalka ku abuurikasto qalaalaso siyaasadeed.
5-waxaa u soo jeedineyaa xukuumadu inay hormuud ka noqoto wada xaajoodka, dhigtana gogosha wada hadalka iyo turxaan bixinta khil aafaadka hareeyey arrimaha doorashooyinka
6-waxaan si gaar ah ugu soo jeedineynaa warbaahinta qeybaheeda kala duwan in ay xil gaar ah iska saaraan farrimaha ay u soo gudb inayaan Bukshada, kana fogaadan wax kasta oo keeni kara kana qeyb qaadan kara iska hork eena bulshada.waxaa ku saxiixnaa qoraalka culimada masuul iyiinta kala ah:-
1-Sh.Bashiir Axmed Salaad G//Hey'adda Culim ada Soomaaliyeed
2-Sh.Yuusuf Cali CeynteGuddoomiyaha Majlis ka Culimada Soomaaliyeed
3-Sh.shariif Maxamed Cumar Golaha Guud ee Culimada Soomaaliyeed
DF SOOMAALIYA OO SHALAY SOO SAARTAY DIGNIIN CUSUB
DFS ayaa Shalay soo saartay digniin cusub oo ka dhan ah duufaano la sheegay inay kusoo fool leeyihiin deegaano ka tirsan Waqooyiga Soomaaliya W/gargaarka iyo M/Musiibooyinka Soomaaliya ayaa qoraal digniin ah oo ay Shalay soo saartay ku sheegtay in laga soo bil aabo maalintii khamiistii ay bilowdeen curasha da dabeylaha ‘Taroobikaalka’ oo ka abuurmay aaga cirifka Waqooyi ee badweynta Hindiya.
Wasaarada ayaa si adag ugu digtay dadweyna ha iyo kalluumeysatada deegano ka tirsan waq oyiga Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntlanad, iyadoona xustay in duufaantaasi ku socoto xa waare u dhaxeeya 95 ilaa 110-KM saacadiiba.
Waxa sidoo kale wasaaraddu sheegtay in dab eylahaan oo aad u xoogan ay Shalay ku waja han yihiin jihada waqooyi Bari ee dalka, gaar ahaan dhinaca dhulka Bari ee dhaca Xeebta u dhaxeysa labada Magaalo ee Boosaaso & Xaa fuun ee gobolka Bari, inta u dhaxeyso 4:00 gal abnimo ilaa 8:00 Fiidnimo ee Xalay, sida ay sheegtay wasaaradda.
"Saameynta duufaantan ayaa waxa la saa daalinayaa inay bilaaban doonto saacadaha soo socda, iyadoo halista ugu badana ay wajahay aan degmooyinka kala ah Xaafuun, Isku-shu ban, Boosaaso iyo deegaano kale oo kamid ah” ayaa lagu yiri qoraalka.
Waxa kale oo lagu yiri "Dowladda Soomaal iya waxa ay si gaar ah ugu digeysaaa dhamaan Bulshooyinka kala duwan sida, Kalluumeysata da &dadka ku dhaqan hareeraha Xeebaha inay ka digtoonaadaan khataraha kusoo wajahan dhulka Xeebaha ah, waxaana ay ugu baaqeey saa maamulada degaannada laga cabsi qabo inay duufaanta saameyso iyo dhamaan Hay’ad aha gargaarka inay u diyaar garoobaan xaalada ha soo cusboonadaay, taageerana u muujiyaan bulshada ku nool degaannadaas”.
Waxay cabsida ugu weyn ee duufaantan ay sababi karto ku sheegtay W/Gargaarka &maar eynta musiibooyinka, bur-bur hantiyeed oo ku yi maada Guryaha, deegaanada Xeebta dhaca, doonyaha kalluumeysiga iyo kuwa ganacsigaba.
Taliska CBS Ayaa soo bandhigay Shalay Jaw aanno khaad ah oo ay kusoo qabteen howlgallo ay Ciidanku ka sameeyeen G/Bana aadir, waxa ana gacanta lagu soo dhi gay in ka badan 250 jawaan. Ciidanka Booliska oo howlgallo sameeyay ayaa Saldhig Galbeed D/Dharkenley ee G/ Banaadir ku gubay Khaadka, waxaana sidoo ka le ay Ciidanku gacanta kusoo dhi geen 6 gaari iyo 5 Doomood , kuwaasi oo lagu soo daabulay Jaadkaan oo ah mid aad u tira badan.
Afhayeenka CBS Sadiiq Aadan Duudishe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in in Ciid anka Boolisku ay howlgaladaan sameeyeen wa qtiyo kala duwan. Ganacsatada Soomaaliyeed ayuu digiin u diray Afhayeenka Booiska Soom aaliyeed, waaxaana uu ugu baaqay in khaadka dalka sida sharcidarrada ah lagu soo galinayo ay tallaabo ka qaafdi doonaan.
DFS ayaa Xayiraad saartay Jaadka ka imaan jir ay dalka Kenya, waxaana horay goobo fagaare ah lagu gubay tiro Jawaanno Jaad ah oo Ciidan ka Boolisku ay gacanta kusoo dhigeen.
Maxkamadda G/Togdheer ayaa Shalay dil to ogasho ah ku xukuntay Sakariye Cabdi Yuusuf, oo la sheegay in lagu helay dambi ah inuu Kufsi & dil u gaystay Marxuumad Ugbaad Cali Cabdi laahi, oo ahayd gabadh Dhallinyaro ah.
Ugbaad Cali Cabdilaahi oo ahayd Hooyo 3 carruur ah haysatay ayaa ku fsi iyo dil loogu ge ystay M/Burco ee Somaliland, waxana eede esanaha Shalay kiiskaan loo xukumay uu horey u qirtay inuu isaga ka dambeeyay falkaan.
Ninkaan ayaa booliiska isku dhiibay kadib markii uu u sheegay inuu isagu falkaas ka dam beeyay.
Warbixino horey loo baahiyay ayaa sheegay ay in marxuumada iyo dambiilaha falkaan geyst ay ay isku guri degnaayeen, balse qoyska gaba dha ayaa beeniyay inuu jiray xiriir u dhexeeyay 2dooda.
SHAN BAABUUR OO ISKU DHACAY, KADIB SHIL KA DHACAY DULEEDKA GAROOWE
Ugu yaraan 2ruux ayaa ku geeriyootay, kadib shil gaari oo ka dhacay duleedka Garoowe ee xarunta Puntland. Wararka ayaa sheegaya in shilka uu yimid, kadib markii ay isku dhaceen 5 gaari oo nooca xamuulka qaada ah , kuwa as oo marayey deegaanka lagu magacaabo Shire oo qiyaastii 150 km u jira M/Garo owe ee xarun ta gobolka Nugaal.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in 2qof ee ku dhintay shilkaasi uu mid ka mid ah uu weli ku hoos jiro gaari rogmaday.
Waxaa sidoo kale shilkan ka dhashay khasaare hantiyeed oo aad u fara badan, waxaana burburay dhammaan alaabtii ay wadeen gawaarida isku dhacday.
Goobta uu shilku ka dhacay waxaa gaaray dadweyne iyo mas’uuliyiin ka tirsan Puntland, si gurmad loogu sameeyo dadka ay waxyeeladu soo gaartay.
Maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa deegaanada Pubntland ku soo badanayey shilal gaari, iyada oo loo sababeynayo darawallada oo si xawli ah u kaxeynaya baabuurta.
Askari ka tirsan Ciidanka DFS ayaa Shalay gudaha D/Waaberi ee G/Banaadir ku dilay Da waral Mooto Bajaajle ahaa, waxaana falkaas ka soo baxaya faah faahino dheeraad ah.
Goobjoogayaal la hadlay Idaac adda Dalsan ayaa u sheegay in As kari hubeysan oo watay mooto no oca 2 lugaaleyda ah uu rasaas dho wr ah ku dhuftay Darawalka Mo oto Bajaaj, xili uu mararay agagaarka Dugsiga 21 October ee degmada Waaberi.
Dilkaas loo geystay Darawalka Mooto ayaa ka dambeeyay, kadib markii Askariga falka geys tay uu isku dayay inuu si xoog leh Darawada ka ga qaato qaad badan uu mootada ku watay, arr intaasina uu ka dhashay muran kooban, ka dib na Askariga uu carooday, sidaasina uu rasaasta ugu furay Bajaajlihii, isagoona goobta ku geer iyooday.
Sidoo kale Askariga ayaa intaas kadib qaat ay qaadkii lagu waday Mootada oo la tilmaamay inay lahaayeen qaadkaas Haween oo doonayay inay ka Ganacsadaan, hayeeshee Darawalkii u waday la toogtay, Askarigana uu ku baxsaday Mooto uu watay.
M/Muqdisho ayaa waxaa xiliyada qaarkood Askarta ka tirsan Ciidanka DFS dilal bareer ah shacabka ugu geysta, kadib murano kooban oo soo kala dhex-gala, waxaana Caasimadda hor ey uga dhacay dilal ay geysteen CDS.
GUDDOOMIYAHA CUSUB EE SHABEELLAHA HOOSE OO XILKA LA WAREEGAY
Guddoomiyaha Cusub ee G/Sh/Hoose C/dir Maxamed Nuur Siidii ayaa Shalay si rasmi ah xilka ula wareegay kadib munaasabad xilwareej in oo ka dhacday M/Baraawe ee G/Sh/Hoose.
Guddoomiyihii hore ee G/ Sh/Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa xilka Gob olkaas ku wareejiyay Gud doomiye Siidii oo isna ho rey u soo qabtay xilkan.
Md. Najax ayaa ka sheekeeyay guulihii iyo wax qabadkii uu sameeyay maamulka Sh/Hoose muddadii uu Guddoomiyaha ka ahaa. "G/Sh/ho ose oo aan soo xukumayay 20-kii billood ee la soo dhaafay waxaan gaarnay guulo waaweyn innaga oo xaqiijinay fulinta mashaariic muhiim u ah bulshadda sida Tabbabaridda shaqaalaha maamullada, Daadajinta nidaamka dowliga ah, qodista kannaallo, xoreynta deegaanno iyo de gmooyin ka tirsan G/Sh/Hoose” ayuu yiri Gud doomiyihii Md.Najax.
GuddoomiyeCusub Md. Siidii ayaa Ibraahim Najax uga mahadceliyay shaqooyinkii Gobolka uu kasoo qabtay, wuxuuna ballan qaaday inuu shaqooyin kale Gobolka ka qaban doono inta uu xilka haayo. Hoggaamiyaha KG/S/Md.Cabdic asiis Laftagareen ayaa 7adkii hore C/dir Siidii u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee G/Sh/Hoose.
HALKUU KA BAXAY MADAXWAYNE TRUMP-KII JECLAA INUU FAGAARAYASHA KA HADLO?
Maxay tahay sababta uu madaxwayne Tru mp u aamusay oo uu hadalka u yareeyay?
Waxaa uu ahaa shaqsi jecel in indha dadka uu soo jiito. Bal se bishan 14 maalmood kama uusan soo bixin Aqalka Cad.
Bal aan eegno 7/yadii ugu da mbeeyay qaab kii uu u qaatay iyo waxyaa bihii uu qabanayay.
Askari ka tirsan Maariiniska Marey kanka oo xiran galoofis cad iyo mask araati ma dow ayaa taagan goo bta laga galo Aqalka Cad ee loo yaqaanno West Wing horraantii 7adkan. mar haddii u askeriga halkaa taagan yahay wa xa ka dhigan tahay madaxwaynaha waxaa uu ku sugnaa goobtiisa shaqo.
Balse madaxweyne Donald Trump ma uusan ku howlaneyn shaqooyiinka caadiga ah ee ay aheyd inuu qabto madaxwayne xilka ka sii deg aya. 4 sano ka hor, waxaa uu ku sugnaa xafiis ka ku yaalla Aqalka Cad ee Oval isaga oo taloo yiin ka helayay Barack Obama, oo xillligaa ahaa madaxwayne islamarkana uu markii dambe isa ga badalay.
Taa badalkeeda waxaa uu Trump ku mashq uulsanaa arrimaha doorashada iyo daawashada Telefishinka sida ka muuqata qoraalada uu soo dhigo barta Tweetar-ka.
Maalmihiisa u dambeeyay ayaa ahaa kuwa ka duwan doorashada ka hor iyo qaabkii uu u dhaqmayay. Wakhtigii doorashada ka horeeyay wuxuu si joogta ah u gali jiray safaro islamarka na waxaa uu malin kali ah u safar ku kala bixiy ay 4 gobol.
Waxaa uu khudbado ka jeedin jiray si u soo baxyada waxaana si joogta ah uu uga soo muu qan jiray telefishinada. Waxaa uu hadalo lagu maadsado ku tuuri jiray musharaxa Dimuqraadi ga, Joe Biden.
Tan iyo maalintii lagu dhawaaqay in doorasha da uu Biden, ku guuleystay, Trump waxaa uu is ku soo xiray Aqalka Cad.Waxaa uu kamarooyiinka hortooda ka soo muuqday oo kali ah labo mar. Mar waxay ahayd maalinkii la xusayay ciid amadii Mareykanak uga dhintay dagaalkii 2aad, halka marka 2aad ay ahayd mar uu ak hadlayay feyriska Corona isaga oo ku sugan Aqalka Cad ayuu shir jaraa'id qabtay.
Trump xilligaasi wax su'aala ah kama uusan jawaabin sidii caadada ahaeyd. Sidoo kale uam adkeysan karo mowjado taageerayaashiisa ah so baxaya Shalay afaafka hore ee aqalka cad.
Trump ayaa sidoo kale si dhaw ula socday Telefishinada muxaafidka ah oo lagu yaqaaano inay falanqeeyaan fikrado ku saabsan dabino dhanka doorashada.
Trump ayaa maalmihii u dambeeyay sidoo kale shaqada ka ceyrinayay saraakiil sarsare.
Xoghayaha gaashaandhiga Mareykanka Mark Esper, oo ka hor yimid in ciidamo loo daadgure ey magaalooyiin ay ka dhacayeen dibadbaxya ayuu madaxwaynaha shaqada ka ceyriyay.
Waxaa uu sidoo kale xilka ka qaaday Christ opher Krebs, oo ahaa sargaal sare oo ka tirsa naa hay'adda ammaanka internet-ka ee Mareyk anka ka dib markii uu sheegay in doorashada ana lagu shuban.
Madaxwaynaha ayaa dhanka kale qaatay go' aano ay ka mid ahaayeen in la dhimo tirada ciid ammada Mareykanka ka joogo Afqanistaan iyo Ciraaq. Go'aanada tallaaboyiinkan oo lagu gaar ay shir ay albaabada u xirnaayeen ayaa saam ayn waqti dheera ha ku yeelan doona Mareyk anka iyo caalamka guud ahaan.
Waxay tallaabooyiinkan ay caqabad ku hor-gudban ku noqon doonaan Biden marka uu xafi iska la wareego bisha January.
Marka dhammaan arrimahan laga soo tago wa xaa uu madaxwaynaha si dhaw uu isha ugu hay ay halka ay marayaan dacwadaha ay gacanta ku hayaan qareenadiisa ee doorashada ku saa bsan.
Qaar ka mid ah dadka ka ag-dhaw ayaa wax aysabab uga dhigeen ka maqnaashiyaha Trump ee fagaarooyiinka inay tahay arrinta kiisaska uu maxkamada geeyay oo uu ka war dhowrayo.
"Waxaa uu isku dayayaa in dagaalka dhanka sharciga ka war sugo," waxaa sidaasi yiri Kurt Volker, oo horey ula soo shaqeeyay madaxwa yne Trump.
Jabka Trump maalintaan u joogay
7/yadii u dambeeyay, dadka dhaliila madaxway naha waxay ku cambaareynayeen sida uu u dii dan yahay in uu gacan ka geysto sidii xilka loola kala wareegi lahaa.
Tageerayaasha madaxwaynaha ayaa dhank ooda ku raacsan go'aankiisa. Malaayiin dadka Maeykanka ah ayaa dhanka kale Trump la qaba fikirka ah in doorashada waxa isdaba marin dha cday. Ku dhawaad 4 meelood 3 meel taageer ayaasha Jamhuuriga ayaa sida ku cad ra'yi uru urin la sameeyay waxa ay shaki ka qabaan in doorashada Biden uu ku guulesytay.
Dhanka kale qaar badan oo ka mid ah shaq aalaha Aqalka Cad ayaa u muuqda kuwa niyad ahaan shaqada ka tagaya iyaga oo isu diya arinaya maamul cusub.
Qaar ka mid ah shaqaalaha Aqalka cad ayaa la arkayay iyaga oo qalabkooda kala baxaya Aqalka Cad. Mid ka mid ah saraakiishii hore ee Aqalka Cad oo ah khabiir dhanka siyaasadda arrimaha dibadda islamarkana wali dowladda u shaqeeya ayaa sheegay in isaga iyo saaxibadii ay sugayaan-uun inta uu wqatigooda ka dhama anayo. XIGASHO:BBC
WERIYE U DHACAY SHIR XASAASI AH OO AY LAHAA YEEN WASIIRADA DIFAACA EE YURUB
Weriye u dhashay dalka Netherl nds ayaa gal ay shir hab fogaan arag ah oo ay lahaayeen wa siirada difaaca ee midowga Yurub. Shirkan oo ahaa mid qarsoodi ah aya Daniel Verlaan oo katir san warbaahinta RTL Nieuws waxaa uu galay shirka ka dib markii wasiirka difaaca ee dalka Netherlands ay si lama filaan ah xogta iyo nambarada sirta ah ee shirka usoo dhigay barta ay ku leeyahay Twit er-ka.Shirkan oo ahaa mid arag ah ayaa markii uu soo gal ay shirkii socday waxaa uu gac anta u taagay wasiiradii ku jiray shirka.
" Ma ogtahay in aad soo gash ay oo aad ku soo dhex dhacday shir sir ah?" ay uu yiri mad axa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Josep Borrell oo shirka ku jiray.
Weriyihii ayaa markii lala hadlay waxaa uu cudur daar ka bixiyay shirka uu iska soo galay, waxaana u yiri "Haa, waan ogahay, waana ka xumahay.Waxaan ahay weriye u dhashay Net herlands, waana ka xumahay in aan idin kasoo dhexgalay shirka," ayuu ku jawaabay weriye Ver laan oo dhoola caddeynayay.
Waxaa uu mas'uuliyiintii shirka ka qeybgalay ay uu u sheegay in uu ka baxayo kadib markii Borrell uu u sheegay inay u wanaagsan tahay in uu shirka isaga baxo kahor inta aanan loogu wicin booliiska, maadaama sida uu hadalka u dhigay ay tahay arrin khalad ah.
Weriye Verlaan ayaa dib laga ogaaday in shirka uu galay ay u sahashay wasiirada difaa ca ee dalka Netherlands, Ank Bijleveld oo baahi say sawir uu ku jiro xogta sirta ah ee shirka lagu galo.
Arrintan ayaa bannaanka soo dhigtay wal aac holeh iyo su'aalo dhowra ah oo la xiriira badqab ka shirarka xasaasiga ah ee fogaan aragga ah ee ay yeelanayaan madaxda midowga Yurub.
Shirkii wasiirada difaaca ayaa la sheegay in la soo gabagabeeyay maadaama loo dhacay shirka, waxaana afhayeenka gollaha midowga Yurub uu sheegay in arrinta weriyaha uu ku dha qaaqay ay tahay "xadgudub", laguna wargelin doonaa dadka ay khuseyso.
Wasaaradda difaaca ee Netherlands ayaa sheegtay in xogta shirka ee la baahiyay ay aha yd khalad weyn oo dhacay.XIGASHO:BBC
MAXAABIIS XABSI KA BAXSADAY, KADIBNA SHIL GAARI KU DHINTAY
Dalka Lubnaan, 5maxbuus ayaa ku dhintay shi lgaari, kadib markii baabuurkii ay ku baxsanay een uu geed foodda daray. Maxaabiista ayaa ka mid ahaa tiro ka soo baxsatay xabsi ku yaal meel u dhaw caasimadda Beyrut.
69 maxbuus ayaa fursad u helay inay jebiya an albaabada qolalkii ay ku xirnaayeen, sidaas na ay ku baxsadaan.15 kamid ah maxaabiistaas ayaa gacanta lagu soo dhig ay, sida ay sheegtay W/wa rarka ee D/Lubnaan, NNA. Mid kamid ah maxaa biista ayaa waxaa xabsiga dib ugu celi say hooyadii.
Shacab careysan iyo booli ska Lubnaan oo gac anta isu la tegay
Laamaha ammaanka ayaa baaritaan ka wa day deegaanka, waxaana dadka halkaa ku nool lagu wargeliyay inay feejignaadaan.
Shilka ayaa dhacay kadib markii 6 kamid ah maxaabiista baxsadka ahaa ay xoog qaateen gaari marayay meel u dhaw xabsiga oo ku yaal degmada Baabda. "Gaari cad oo nooca Dacia ah ayaa afka daray geed wadada dhinaceeda ku yaal. Waxaa saarnaa tiro maxaabiista soo go osatay ah oo ka afduubay darawalkii watay," ayay sheegtay wakaaladda NNA.
Waxa ay intaa raacisay in 5 maxbuus ay ku dhi nteen shilka, halka mid kalena uu ku dhaaw acmay. Mas'uuliyiinta Lubnaan ayaa billaabay baaritaan ku aaddan ka baxsashada xabsiga.
Dacwad oogge ayaa sheegtay inaanay me esha ka saari doonin in nooc wadashaqeyn ah ay dhexmartay maxaabiista & ilaalada xabsiga.
MAXAA LOOGA HADLAY KULANKA MUSHARIXIINTA & MADAXWEYNAHA GALMUDUG?
Madaxweynaha D/G/ Galmudug Axmed Ca bdi Kaariye (Qoorqoor) oo ku sugan M/Muqdi sho ayaa la kulmay qaar kamid ah musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa kasoo jeeda degaannada Galmudug.
Kulanka masuuliyiinta kasoo qeybgalay ayaa waxaa kamid ahaa, R/Wasaarihii horeXasan Cali Kheyre, Madaxweyni hii hore ee Galmudug C/ kariin Xuseen Guuleed, Si yaasiga C/raxmaan C/sh akuur Warsame hoggaa miyaha Xisbiga Wadajir iyo Mustaf Sh.Cali Dhu xuloow oo ka tirs an Xildhibaannada Golaha Shacabka, waxaa na kulanka ka maqnaa Mad axweynihii hore ee Soo maaliya Xasan Sheekh & Musharax Daahir Maxamuud Geelle.
Kulanka ayaa ahaa mid wadatashi ah oo loo ga arrinsanayey maareynta marxalada kala gu urka ah iyo masiirka dalka iyo khilaafka ka taa gan Guddiyda doorashooyinka Soomaaliya oo ay qaadaceen musharixiinta Madaxweynaha.
Wararka laga helay kulanka ayaa waxaa ay sheegayaan in Musharixiinta Madaxweynaha ay Madaxweyne Qoor Qoor ku cadaadiyeen in uu bedelo Xubnaha Guddiga doorashooyinka ee uu soo Magacaabay, hayeeshee uu weli iska dif aacayo eedeynta ay u jeediyeen oo ah in uu ka soo xulo xubno ka tirsan NISA &Shaqaalaha dowladda Soomaaliya.
Waa kulankii labaad oo ay yeeshaan Musha rixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ee kasoo je eda degaannada Galmudug iyo Madaxweynaha Galmudug, iyaga oo kala hadlayay Arrimaha do orashooyinka iyo cabashada ay ka qabaan Gud diyada doorashooyinka.
Hoggaamiyeyaasha 20-ka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa ballan-qaad aya Shalay si loo hubiyo in si caddaalad ah loo gu qaybiyo tallaallada COVID-19, dawooyin ka iyo tijaabooyinka adduunka oo dhan, sida ku xu san war-murtiyeed qabyo ah oo ay soo saareen, si loogu taageero waddamada saboolka ah ee la daalaa dhacaya ka-soo-kabashada cudurka faafa ee coronavirus.
Cudurka ‘COVID-19 ayaa dhaqaalaha addu unka ku tuuray hoos u dhac aad u qoto dheer sannadkan iyadoo loo baahanyahay dadaalo dheeri ah si loo xoojiyo dib-u-soo-kabashada dhaqaale ee 2021, Arrinta ayaana ahayd kuwa u gu sarreeya ee ajandaha Shirkan.
Dhibaatooyinka mataanaha ah ee aafada iyo soo-kabashada aan la hubin ee caalamiga ah ayaa hareeyay maalintii ugu horreysay ee shir kan oo laba maalmood socday kaasoo uu gudd oominayay Dalka Sacuudi Carabiya, Isla marka ana ku wareejinaya madaxtinimada G20 Dalka Talyaaniga bisha soo socota.
Boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan Bin C/casiis ayaa sheegay "Waxaan ku rajo weyna hay horumarka laga sameeyay horumarinta talla alka, qalabka daaweynta iyo qalabka baaritaan ka ee COVID-19, laakiin waa inaan ka shaqeyn aa abuurista xaaladaha helitaanka qalabkan oo la awoodi karo oo loo siman yahay dhammaan dadka Dunida oo dhan ayuu ku yiri khudbadiisii ​​furitaanka shirka.
SHIINAHA OO MARKII UGU HORREYSAY DIB USOO CELINAYA DHAGXAAN UU BISHA U DIRAY
Shiinaha ayaa sameynaya isku daygii ugu horreeyay ee uu dib ugu soo celinayo dhagxaan tii tijaabada ahaa ee uu u diray bi sha tan iyo 1970-maydii
Wuxuu Shiinaha rajeynaya in aaladda Chang'e-5 ee aan cidna wadin, maalinta Talaadada dib u bilaabi doono taasi oo la soo noq on doonto tijaabooyinkii lagu ogaan lahaa macl uumaadka asalka bisha.
Hawlgalkii ugu dambeeyay ee noociisa ah, oo la oran jiray Luna 24, ayaa waxaa la sameey ay xilligi Midowgii Soofiyeeti 1976.
Haddii tijaabadan ugu dambeysay ay guuley sato, Shiinaha waxa uu noqonayaa waddankii 3aad ee dib usoo celiyo dhagxaanta tijaabada ah ee loo diro bisha. Waxaa ka horreeyay Mare ykanka iyo Waddamadii Midowga Soofiyeeti.
Baaritaanku wuxuu isku dayayaa inuu 2kiilo garam oo muunad ah ka soo qaado aag aan wali la booqan oo Dayaxa ah kaasi oo loo yaqa an Badweynta Duufaannada.
Marka la is barbardhigo, hawlgalkii 1976-dii wu xuu uruuriyay 170 garaam, halka howlgalladii Apollo ee Dayaxa dib loo celiyay 382kg oo dha gax iyo carro ah.
Khubaradu waxay rajeynayaan in tijaabada Chang'e-5 ay si wanaagsan u fahmi doonto inta uu Dayaxu ku shaqeynayo Foolkaanaha.
Shiinaha ayaa tijaabada dayax gacmeedkeedii ugu horreeyay ee bisha loo diro hawada bilaab ay sanadkii 2013-kii.
TWITTER IYO FACEBOOK OO AKOONKA MADAXWEYNAHA MAREYKANKA @POTUS KU WAREEJINAYA BIDEN
Shirkadaha Facebook iyo Twitter ayaa Dorraad oo Sabti aheyd shaaciyay in akoonn ada Mad axweynaha Mareykanka ee Facebook iyo Twitter ay ku wareejin doonaan Madaxweyn aha la doortay ee Joe Biden 20 bisha January ee sa nadka soo socda.
Bogagga @POTUS Facebo ok iyo Twitter waa bogagga ras miga ah ee uu isticmaalo Mad axweynaha Mareykanka. Waa kuwa ka duwan akoonka @realDonladTrump iyo bogga kale @DonaldTrump ee Madaxwey naha haatan xilka ka digaya ee Donald Trump isticmaalo.
"Shirkadda Twitter waxay si firfircooni ku jirto u ugu diyaar garoobeysaa taageeridda marxal adda kala guurka ah oo loo wareejin lahaa Ako onada rasmiga ah ee Aqalka Cad 20-ka bisha Janaayo 2021-ka. Si lamid sidii aan sameynay kala guurkii 2017-kii, fulinta arrinkan wuxuu qa adan doonaa la tashiyo badan oo aan la sam eyno Waaxda Diiwaanada iyo Arkiifiyada Qar anka” ayay Shirkadda Twitter u sidaa u xaqiij isay Wakaaladda Wararka Reuters.
Shirkadaha waaweyn ayaa maalinka cale emasaarka Madaxweynaha iyo ku xigeenka Mar eykanka wareejin doona akoonno kale oo ay ka mid yihiin Akoonada Madaxweynaha ku xigeen ka iyo marwada Koowaad.
"2017-kii ayaa maamulka Obama iyo Tramp kala shaqeynay sidii ay isugu wareejin lahaay een Akoonada Facebook iyo Instagram 20-kii January, haatanna waxaynu rajeyneynaa inaan sidii oo kale sameyno” Facebook ayaa sidaas kaga jawaabtay su’aal ay weydiisay Reuters.
SOOMAALI IYAGOO QAXOOTI KU AH JASIIRAD MAX KAMAD LAGU SOO TAAGAY + SABABTA
Jasiiradda Malta waxaa ka bilowday max kamadeynta soo galooti ay Soomaali ku jirto oo dhibaato isbuucii hore rabshado ka sameeyay M/Ħal Far, waxeyna markii ugu horreysay max kamad kasoo muuqdeen Jim cadii.
Warbaahinta gudaha dalka as ayaa sheegay in soo galooti gan ay ku lug yeesheen rabsha do dhacay taasoo keentay iney waxy eelo soo gaarto hanti lagu qiyaasay wax ka ba dan malaayiin Yuuro. "Maxkamadda waxey u ba ahan tahay iney kala saarto rabshado iyo bana an-bax,” ayuu yiri u doodaha qaxootiga Martin Fenech oo sheegay iney banaan-bax kaliya sa meyeen. Dacwad oogayaasha kuma raacin arr inkaas, waxeyna maxkamadda ka sheegeen ine ysan si naba macquul u aheyn banaan-baxa yaasha iney rabshado sameeyaan.
Waqtiga xukunka lama oga, balse garsoora ha maxkamadda Frendo Dimech wuxuu sheeg ay iney qiimeyn doonaan hantida burburtay ka hor inta aan xukun lagu ridin, waxaana lagu mii saami doonaa hantida la baabi’iyay.
Xariga ugu badan oo ay soo galootiga ay Soo maalida ku jirto wajahi karaan waa xarig afar sano ah, waxaana la ogyahay in dalka Malta uu yahay kan ugu badan ee reer Yurub kaas oo soo dhaweeya soo galootiga.
Muhaajiriinta maxkamadda lasoo taagay wa xey dhamaantood kasoo jeedaan qaaradda Afri ka waxeyna u kala dhasheen: Gambia, Mali, Guinea, Sudan, Ivory Coast iyo Soomaaliya.
ITOOBIYA OO KU GACAN SEYRTAY QORSHIHII MIDOWGA AFRIKA EE DHEXDHEXAADINTA KHILAAFKA TIGRAY
D/F/Itoobiya ayaa ku gacan seyrtay dadaal lada ururka Midowga Afrika uu ku doonayay in lagu dhexdhexaadiyo dowladda federaalka iyo jabhadda TPLF.
War qoraal ah oo lagu faafiyay bar ta Facebook ee W/Arrimaha Diba dda Itoobiya ayaa lagu sheegay inay been abu ur tahay in R/Wasaare Abiy uu qaabili doon ergada uu G/M/Afrika u magacaabay dhexdhex aadinta D/ Itoobiya iyo Jabhadda TPLF.
"Warka Baraha Bulshada la wareejinayo ee sheegay in ergada M/Afrika ay u safrayaan Itoo biya si ay u dhe xdhexaadiyaan DF/ Itoobiya iyo danbiilayaasha TPLF, waa waxba kama jiraan” ayaa lagu yiri qo raal lasoo dhigay barta rasmiga ah ee ay Fac ebooka ku leedahay W/Arrimaha Dibadda Itoo biya.
Guddoomiyaha M/Afrika ayaa Dorraad magic aabay 3 madaxweyne hore oo Afrikaan isaga oo faray inay dhexdhexaadayaan D/F/Itoobiya & jabhadda TPLFoo ku dagaallamaya G/Tigray.
Dagaalka u dhexeeyay D/Itoobiya & Jabhad da TPLF ayaa galay Isbuucii 3ad iyada oo ay D/ Itoobiya sheeganeyso inay guulo waaweyn ka gaartay dagaalka socda.
ABIY AXMED OO DIGNIIN KAMA DAMBEYS AH U DIRAY XOOGAGA TPLF
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa xoogagga TPLF u qabtay 72 saacadood iney dowladda isu gu soo dhiibaan, xilli ay ciidamada dowladda Ito obiya ay ku sii jeedaan caasimadda Maqale.
Abiy Axmed wuxuu hoggaanka Tigraay uu u sheegay in la marayo "meel aan laga noqon kar in”. Xogagga Jabhadda Xoreyn ta Shacabka Tig raay ee TPLF oo gacanta ku haya dhulka buu raleyda ayaa wacad ku maray iney dagaalka sii wadayaan oo ay isdhiibeyn.
Dagaalka dhowrka 7aad dhex maraya cii dam ada dowladda dhexe ee Itoobiya iyo kuwa daa cadda u ah Tigraay waxaa la rum eysan yahay iney boqollaal qof ku dhinteen ku mannaanna ay ku barakaceen.
Hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebre-mi chael oo u warramay wakaaladda wararka ee Reuters wuxuu sheegay ciidamada daacadda u ah TPLF iney diyaariyeen qorshe rogaal celis ah oo ay kaga adkaanayaan ciidamada dowladda.
"Hirar iyo Mowjado dagaal ayey nagu soo qa
adeen balse waxtar ma leh”, ayuu yiri mar uu u warramayey wakaaladda wararka ee Reuters.
Duration Ongoing contract (Open-ended, subject to organizational
Application period 18-Nov-2020 to 02-Dec-2020
UNMAS as a component of the United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) provides explosive hazard management capacities, including mitigation, to AMISOM as part of a logistical support package. Non-lethal tactical advice and analysis is delivered by UNMAS technical advisors located in each AMISOM Sector Headquarters and at AMISOM Force Headquarters, who support AMISOM planning and operations. UNMAS support includes both enabling ("operate in spite of IEDs”) and response ("defeat the device”).As a component of the UN Mission in Somalia (UNSOM) UNMAS also supports the Federal Government of Somalia, including the Somali Police Force, Somali Explosive Management Authority and National Security Advisor.